Proffesii वा पेशा? शब्द "पेशा" कसरी हिज्जे गर्न?
हिज्जे - एक नाजुक कुरा। यसलाई सही लेख्न नियम दर्जनौँ सम्झना गर्न आवश्यक छ। र "शब्द" सधैं सहायता गर्न आउन गर्दैन र रातो त्रुटि हाइलाइट गर्न। लेखन धेरै विवादास्पद शब्द राम्रो हृदय द्वारा सम्झिन। यो शब्द "पेशा", विशेष, लागू हुन्छ। अक्सर आफ्नो गल्ती सम्मान पनि लेख्नुहोस्। त्यहाँ शब्द "proffesii" वा "पेशा" लेखन को दुई भन्दा साधारण तरिका हो।
"पेशा" को अवधारणा को उद्भव
तपाईंले केही शब्द हुनेछ अघि, अवधारणा शब्द सङ्केत गर्छ कि हुनुपर्छ। दूरी मा ध्वनि दिइरहनुभएको सक्षम उपकरण - उदाहरणका लागि, शब्द "फोन" को 19 औं शताब्दीको अन्त मा एक नयाँ आविष्कार भनिन्थ्यो। मेशिन शब्द को आगमन अघि यो आवश्यक थियो।
र कसरी यो "पेशा" को अवधारणा गर्न उठ्नेछ जब हुनेछ? भन्सार - समाज सधैं मानव कौशल र आंशिक भाग मा निर्धारित थियो कर्तव्य को अलगाव, पहिलो मान्छे छ भन्ने तथ्यलाई। घरपरिवारको र बच्चाहरु - मानिसहरू शिकार, माछा मार्ने र खेती र महिला गरे। जनसंख्या वृद्धि गर्दा, केही सामान को उत्पादन को लागि व्यक्तिहरूलाई संलग्न मौका थियो। त्यसैले हामी शब्द आधुनिक अर्थमा यो पेशामा अलग गर्न थाले। त्यहाँ herders, बुनकर, potters, संगीतकार थिए।
एक पहिलो साधारण व्यवसायहरुको को - एक लोहार। उहाँले फलाम उपचार संग सम्बन्धित थियो सबै, यो नङ देखि तरवार गर्न सबै उत्पादन गरे। योजक छ उदाहरणका लागि, कुनै पनि काठ आइटम, ढोका देखि लिएर र वार्डरोब संग समाप्त गर्न। सुरुमा, सारा परिवार मास्टर मदत थियो र भौतिक सामान को उत्पादन मा संलग्न गरिएको छ। अर्को चरणमा श्रम को विभाजन, प्रत्येक मास्टर नै पेशा भित्र निर्दिष्ट प्रोफाइल संग निर्धारित थियो। यो त्यहाँ केही सामान लागि ठूलो माग थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ। उदाहरणका लागि, केही Carpenters विशेष व्यारेल मा, अन्य संलग्न - को पाङ्ग्रा र अरूलाई - .. Sleigh त्यसैले आदि, र मानव पेशा को धारणा।
कसरी शब्द "पेशा"
यो शाब्दिक "घोषणा" गर्न अनुवाद जो ल्याटिन शब्द profiteor, आउँछ। यो बारी मा, (सट्टा) ल्याटिन उपसर्ग समर्थक बाट लिइएको हो, र fater मूल म (पहिचान)। तपाईं भारत-युरोपेली जरा प्राप्त भने, हामी पुरातन * bha (कुरा) मा आइपुग्दा। शब्द को Profiteor अर्थ निम्नानुसार:
ठूलो स्वरमा र सार्वजनिक रूपमा खुल्लमखुल्ला बोल्न, घोषणा;
खुल्लमखुल्ला आफूलाई चिन्न दावी;
घोषणा आफ्नो अध्ययन को कुनै पनि विषय भनेर;
केहि लागि आशा फाइल न्यायाधीश;
आधिकारिक खुलेको घोषणा, शो;
, कर्तव्य लागि रिपोर्ट गर्न सैनिक सेवा को लागि साइन अप।
केहि बारेमा सार्वजनिक वक्तव्य: शब्द "पेशा" हरेक अर्थ साधारण मा एक कुरा छ।
Cognate professus (एक, स्पष्ट पहिचान) रूसी शब्द "प्रोफेसर" जन्म दिए। प्राचीन रोम professae मा तिनीहरूले खुल्लमखुल्ला गतिविधिको आफ्नो प्रकारको (दोस्रो मूल्य profiteor) घोषणा किनभने वेश्यांए भनिन्छ। अर्को cognate ल्याटिन शब्द - confessia (धर्म), तर हाम्रो भाषा मा, "पेशा" जस्तै "स्वीकार", पाठ्यक्रम, छैन।
रूसी भाषामा शब्द को 18 औं शताब्दीमा फ्रेंच (fr। प्रफेशन) मार्फत ल्याटिन देखि सार्नु छलफल। "गतिविधि" तर भाषाई सीमाना जा रहेको छ, यो अलि फरक अर्थ हासिल गरेको छ। कुनै पनि डेरिवेटिव अघि शताब्दीमा। शब्द "पेशा" को उपस्थिति मानव गतिविधि को प्रकारको वर्णन गर्न अघि हामी शब्द "शिल्प" प्रयोग।
शब्दहरू को अर्थ विज्ञान
व्यवसाय - एक स्थिर र अपेक्षाकृत विस्तृत दृश्य काम, सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव, सीप र काम कौशल को एक निश्चित सेट प्रदान गर्दछ जो, र छ आय स्रोत। , आर्थिक प्राविधिक, रचनात्मक, शैक्षिक, र अरूलाई: व्यापक पर्याप्त व्यवसायहरुको को दायरा, तिनीहरूले प्रमुख भागमा विभाजन गरिन्छ। व्यक्तिगत उदाहरणहरू अर्थशास्त्री,: ट्रेडों प्रबन्धक अभिनेता, लेखापाल, निर्माता, assembling, शिक्षक, अनुवादक। पेशा, एक पेशा, सबैभन्दा पुरानो पेशा को एक महिला परिवर्तन गर्न, एक पेशा चयन गर्न, पेशा द्वारा प्रोग्रामर: शब्द प्रयोग विकल्पहरू। profese, पोलिस - - profesja अन्य भाषामा सम्बन्धित टोकन चेक छन्।
सबै शब्द "पेशा" ठ्याक्कै कसरी हिज्जे थाहा। केही जस्तै यो लेख्न: - यो पेशामा, तेस्रो - proffessiya र चौथो - proffesii, अन्य व्यवसाय। पहिलो दुई विकल्प सबै भन्दा अधिक प्रयोग। एक हिज्जे अंतर्ज्ञान विकास भएकाहरूलाई केही consonants को दोहरीकरण अझै पनि ठाउँ लिन भनेर गर्नुपर्छ, तर अत्यधिक हुनु हुँदैन, त्यसैले तान्नु बाहिर तेस्रो र चौथो विकल्प बुझ्छु। त्यहाँ छन् जाहिर छ, यसको सट्टा unstressed "ओ" "एक" लेख्छन् गर्नेहरूलाई: prafessiya, तर यो मामला मा प्रमाणिकरण cognates छ - स्पष्टता दिन्छ pro'fi।
यस मामला मा खुला प्रश्न रहिरहन्छ। Proffesii वा पेशा? र यो किन यति र अन्यथा छ?
proffesii वा पेशा: मुख्य दुविधा यो छ। हामी यो पटक र सबै को लागि बुझ्न पर्छ। त्यसैले अझै पनि कसरी एक शब्द पेशा हिज्जे गर्न?
यो पेशामा: एक "च" र दुई "सी" संग।
किन त्रुटिहरू छन्?
भ्रामक परिचय, शायद शब्द लग। कसैले दुई पटक "च" सुनेका छ। त्यसैले यो पत्र एक हुनु हुँदैन भनेर देखिन्छ केही गर्छन नरम र नीरस शब्द मा ध्वनि, र, आफ्नो drawl भन्छन्। यो शब्द "पेशा" हिज्जे गर्ने बारे पक्कै कारण छ। तर यो सधैं आफ्नो आफ्नै उच्चारण भर छ गर्दैन।
लागि डबल लेख्नका लागि "को", यो साँच्चै यो व्यञ्जनवर्ण लामो उच्चारण कारण हो। सामान्य, लामो consonants मा etymon बदलिने डिग्री मा रूसी भाषा को articulation मा देशान्तर भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो शब्द मा आफ्नो स्थान मा निर्भर गर्दछ। को लागि कमजोर र बलियो स्थिति बीच भेद डबल consonants। ध्वनि intervocalic स्थिति छ भने, पछि, स्वर जोड यस्तो स्थिति बलियो मानिन्छ, र लम्बाइ कायम छ, र लेखन मा।
हामी अंग्रेजी शब्द पेशा र रूसी "पेशा" तुलना भने, अनुसार बस बलियो स्थितिमा दुई अक्षर "ग" लेख्न आवश्यकता छ, र यसैले।
मदत गर्न एटिमोलजी
शब्द उधारो गरिएको छ, यो यसको etymon पूरा गर्नुपर्छ भनेर मान्छु गर्न तार्किक छ। तर यो मामला सधैं छैन। पहिले, रूसी भाषामा डबल पत्र को अस्थायी हानि देखि शब्दहरू धेरै। दोश्रो, को विवादास्पद प्रश्न छ, भाषा कस्तो स्रोत रूपमा मानिन्छ। अक्सर एक र एउटै शब्द पनि सम्बन्धित भाषाहरु विभिन्न तरिकामा लिखित। - ग्रुप, अंग्रेजी - समूह रूसी जर्मन "समूह" gruppe, फ्रान्सेली लेखिएको छ: यहाँ केही उदाहरण हुन्। यदि rukovodstvovtsya मात्र यो नियम कसरी निर्देशित हुनुपर्छ भाषा कस्तो मा थाहा?
तर, शब्द संग "पेशा" सबै सजिलै भयो: (। Fr) (। लैट) सबै भाषामा, यो विशेष अवस्थामा एक "च" र डबल "एक" :. प्रफेशन (। Eng), पेशा ", professio संग spelled छ, तपाईंले सुरक्षित स्रोत भाषा आधारित हुन अब प्रश्न कसरी लेख्न छ -। proffesii वा पेशा, अन्तमा समाधान।
मूल "पेशा" र "म" को अन्त: यसको ल्याटिन समकक्ष विपरीत, शब्द दुई morphemes हुन्छन् छलफल। "समर्थक" उपसर्ग को प्रारम्भिक अक्षर छैनन्। पेशा, व्यवसाय, पेशा, व्यवसाय, व्यवसाय: अन्त मामला र संख्यामा शब्दहरू परिवर्तन गरेर निर्धारण गर्न सकिँदैन। व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक, प्राध्यापक, समर्थक: शब्द पेशा मूल धेरै अन्य शब्दहरू आधार को भाग हो। पहिलो तीन गठन गर्दै suffixed तरिका, मूल कुराहरू को ट्रंकेशन - अन्तिम। तथापि, शब्द "प्रोफेसर" र "पेशा" नै मूल कि - एक moot बिन्दु। केही भाषाविद् तिनीहरूले लामो साधारण अर्थमा गुमाएका भन्ने विश्वास गर्छन्।
meaningfully समान टोकन
शब्द पेशा गर्न एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् टिप्न सजिलो छ। विशेषता, शिल्प, काम, दर्जा, पेशा, व्यक्तिको पेशा, काम, काम, योग्यता, व्यापार, प्रोफाइल: शब्दहरू अर्थ मा समानता को एक नम्बर गरिब छैन। सबैले एक पूर्ण पर्याय हो। उदाहरणका लागि, शब्द पेशा जटिल कौशल र ज्ञान प्रशिक्षण को प्रक्रिया मा प्राप्त र तदनुसार पुष्टि समावेश छ। त्यो छ, अर्को शब्दमा, विशेषज्ञता दस्तावेज हुनुपर्छ, र यो पेशामा खरिद गर्न सकिन्छ र वास्तवमा, विशेष प्रशिक्षण बिना। उहाँले हुनुको समय को लागि काम गरिरहेको छ जो, र यो फरक हुन सक्छ - एक सरल तरिका मा भने, यो पेशामा व्यक्ति जसलाई उहाँले अध्ययन र पेशा भन्छन् गतिविधिको क्षेत्रहरू। तर मूलतः माथि सूचीबद्ध प्रत्येक टोकन शब्द पेशा गर्न पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसैले, शब्द "पेशा" को हिज्जे याद गर्न, तपाईँले एक पटक र सबै को लागि यो लेख पढ्ने पछि: यो एक "च" र दुई spelled छ "ग"।
"हैम्बर्ग स्कोर": मान र phraseologism को मूल
"... साथै '- अल्पविराम र आफ्नो प्रदर्शन को लागि नियम
कम्पाउन्ड nouns। नियम जटिल nouns लेख्न defisnogo फ्यूज र
"एक Seizes", "शान्त": idiomatic कसरी विन्दुमा टिप्न?
अधीनस्थ adverbial संग जटिल वाक्य: साहित्य तालिकाबाट उदाहरण
अरबी वर्ण र आफ्नो अर्थ
पुरुष braids: प्रकार, बुनाई पाठ
ग्लास (सुझावहरू अप्रेंटिस) कसरी ड्रिल गर्न
जो गलत ठाउँमा पार्किङ लागि ठीक छ?
युवा दिन कहिले र कसरी मनाईयो?
शुरुवातका लागि प्याचवर्क
कुनै साइड इफेक्ट छ जो स्ट्रोक मा चिकित्सा,! वास्तविकता वा मिथ्या?
साहित्यको वर्षको लागि पुस्तकालयमा प्रदर्शनको नाम। कुन ध्यानमा घटनाहरू भुक्तानी गरिनुपर्छ
आफ्नो हातले शिल्प प्लास्टिक बोतल बाहिर। के छरितो हुन सक्छ?
आला वा बजार खण्ड? व्यापार मा आफ्नो स्थान कसरी पाउन।
कसरी 10 सर्टकटहरू विन्डोज देखि तीर हटाउन
गर्भावस्था को समयमा Bioparoks